Iiholide ezingaphezu kwamafu eCarinthia
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSabrina
Siyakwamkela ngokufudumeleyo kwikhaya lethu leholide yendalo. Indlu yethu yagqitywa ngentwasahlobo ka-2018 ngokuqwalaselwa okukhulu kwiinkcukacha kwaye kuthathelwa ingqalelo imiba yolwakhiwo lwebhayoloji.
Indlu ibekwe phakathi kweNockberge kwi-1600m kwaye inika umbono omangalisayo weentaba ezijikelezileyo.
Zombini ehlotyeni ukuhamba kunye nokuhamba ngebhayisikili kunye nobusika kuzo zonke iintlobo zemidlalo yasebusika (imathambeka kunye neendlela ezinqumlayo ze-900m), indlu yindawo efanelekileyo.
Kubalulekile kuthi ukuba uphumle ngexesha lakho leholide. Oku sikuthathele ingqalelo xa sisakha le ndlu. Umzekelo, iindawo zokulala ziphuculwe ngokwe-geobiologically, izinto zendlu zisetyenziswa ngokuzinzileyo, kwaye imimandla yokuphazamiseka kombane iyathintelwa.
Enye ingongoma ebalulekileyo sisixa esikhulu sendawo. Malunga ne-140 yeemitha zesikwere kukho indawo eyaneleyo yokuba wonke umntu abe nenkululeko yakhe nokuba useholideyini.
Ukwenza yonke into ibe ngcono, iifestile kunye neengcango ze-balcony kuwo onke amagumbi zibonelela ngombono obalaseleyo weentaba ezijikelezileyo. Ukuba imozulu ilungile, unokubona i-Itali okanye iSlovenia kwisidlo sakusasa.
Xa sisakha indlu, sigxininise kakhulu ekwakhiweni kwebhayoloji, ngoko ke ukongeza kwiintambo ezikhuselekileyo, iindawo zokulala nazo zilinganiswe ukuze iindawo zokulala zingabikho kuyo nayiphi na indawo yokuphazamiseka.
Abantu abane-alergy nabo baya kuphumla apha. Ukusuka kumphakamo oyi-1600m, iintwala zinengxaki okanye azinawo amathuba okuba ziphile. Kwaye ukuze kulungiswe yonke into, i-vacuum cleaner ephakathi ifakwe endlwini yethu, evuthela uthuli olucolekileyo ngqo ngaphandle. Unyango lokwenyani kubo bonke abantu abakwaliwayo!
Indawo yendlu ifanelekile ukwazi iCarinthia enelanga. Ngemoto useFeldkirchen kwimizuzu engama-25 okanye eVillach okanye kwikomkhulu lephondo iKlagenfurt malunga nemizuzu engama-50.
Ngaphantsi kweyure unokufumana amava endalo, inkcubeko kunye nokuzonwabisa okungenako ukutyelelwa kwiholide enye.